Burbur badan iyo daadgureyn roobab culus awgood | Saadaasha Shabakadda
Marka la eego saadaasha saadaasha hawada ee la sameeyay maalmihii la soo dhaafay, kow iyo toban gobol oo Isbaanishka ah Waxaa heegan la geliyay roobab culus iyo duufaanno darteed. Gaar ahaan, way ka xoog badan yihiin Cádiz, Malaga, Valencia iyo Tarragona Dhamaan digniinta la bixiyay waa heer “jaalle” ah, taas oo macnaheedu yahay khatar sababo la xiriira roobab aad u daran. Si kastaba ha noqotee, digniinta la siiyay Cádiz, Malaga, Tarragona iyo Valencia ayaa loo qaaday "oranji", taasoo muujineysa halista ugu muhiimsan.
Magaalada Cádiz, roobabka culus waxay dhib ka dhigayaan isu socodka wadooyin badan daadadkuna waxay geystaan ​​khasaarooyin badan oo qasbay in la jaro wadooyin dhowr ah oo shabakada ah.
Waxaa la helay nin 54 jir ah dhintay ee degmada Conil de la Frontera (Cádiz) ka dib markii uu ku xaniban yahay cagaftii uu ka shaqeynayay. Wuxuu ku sugnaa beer markii la xanibay. Duqa magaalada Conil, Juan Bermúdez, ayaa sheegay in dhacdadani aysan wax xiriir ah la lahayn daadadka ka dhaca magaalada.
Dhanka kale, haweeney ayaa raacda la waayey ka dib markii gaarigii uu saarnaa la dhaqay. Haweeneydan ayaa ku safreysay magaalada Sant Llorenç d’Hortons ee magaalada Barcelona, ​​roobabka culus ee da’ay ayaa sababay daadad qaaday gaadiid fara badan. Nin la socday ayaa waxaa u suurta gashay inuu ka dego gaariga markii, isagoo garaacaya geed, waxay awood u yeelatay inay qabsato laan ay ka baxdo daaqada.
Wakiilo badan ayaa ka qeyb qaadanaya raadinta haweeneydan. Iyaga dhexdooda waxaan ka helnaa dab-demiyeyaal, diyaarad helikobtar ah, xubno ka tirsan koox buur gaar ah iyo nashaadaadka biyaha hoostooda iyo Kooxda Baadhista Canine, oo ay weheliyaan Mossos d'Esquadra, wakiillada miyiga iyo mutadawiciinta ilaalinta madaniga ah.
Boqolaal qof ayaa sidoo kale lagu go'doomiyay daadadka ka dhacay Vejer (Cádiz). Hay'adaha amniga iyo gurmadka ayaan awoodin inay si caadi ah u shaqeeyaan waxayna ahayd inay u dhaqmaan si ay u caawiyaan dadweynaha iyagoo furay xarunta isboortiga ee degmada si ay ugu adeegaan qoysaska ku qasbay inay ka baxaan guryahooda.
Ugu dambeyntiina, Murcia, waxaan ka helnay in qaar ka mid ah dab-demiyeyaashu ay awood u yeesheen inay badbaadiyaan nin baabuurkiisa uu waddada ku xannibmay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Daadadka » Burbur badan iyo daadgureyn roobab culus awgood